Izindaba - Umbukiso obukhoma we-International eCommerce Supply Chain Fair ngoSepthemba 23
Ngomhla zingama-23 kuSepthemba 2021, sizobamba iqhaza embukisweni we-e-commerce wamazwe ngamazwe, ozoqala ngoSepthemba 23 kuya kuSepthemba 25. Inombolo yethu yedokodo yi-B8102-B8103. Uma kungenzeka use-Shenzhen, wamukelekile ukuthi uvakashele umbukiso wethu, uhlole imikhiqizo, futhi uxoxe ngokubambisana.
Ngaleso sikhathi, Sizokwenza ukusakaza bukhoma ku-inthanethi ngoSepthemba 23 ekuseni ngosuku lokuqala lomcimbi. Wonke amakhasimende amasha namadala amukelekile ukuthi eze azobuka.
Setha amakhuphoni ahlukene ezethameli zethu egumbini elibukhoma lokusakaza bukhoma. Amakhuphoni esaphulelo angafika ku-2,000 US dollars, uma ufaka i-oda lokuthenga amasampula egumbini lethu lokusakaza bukhoma, kuzoba nezinye izaphulelo ezengeziwe.
Isikhathi sokusakaza bukhoma simi kanje:
Isikhathi sase-Beijing: 9:00-11:00AM, ngoLwesine, Sep 23, 2021
Isikhathi Esijwayelekile sase-Pacific: 6:00-8:00PM, ngoLwesithathu, Sep 22, 2021
Isikhathi Sase-US SaseNtshonalanga: 9:00-11:00 PM, ngoLwesithathu, Sep 22, 2021
Njengomkhiqizi wangempela oseneminyaka engaphezu kwengu-8 esebenza embonini yezokuthutha, saqala eyethu i-R&D yemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngo-2019. Kulokhu kusakazwa bukhoma, sizokwethula eminye yemikhiqizo yethu eyimfihlo yesithuthuthu sikagesi ngokuningiliziwe. . Kubandakanya i-Mankeel Silver Wings yethu eklanywe i-Porsche, idizayini evamile yaseJalimane nokukhiqizwa kwe-Mankeel Steed, nenye inguqulo yabathengi ye-Mankeel Pioneer kanye nenguqulo eyabiwe yesikuta sikagesi. Izitolo zethu zaphesheya kwezilwandle e-Europe nase-United States nazo zizokwethula ngokuningiliziwe ngayinye ngayinye.
Lapha ungachofoza isixhumanisi esibukhoma esingezansi ukuze ungene egumbini lethu lokusakaza bukhoma uma kuqala ukusakazwa bukhoma, noma ungaskena ikhodi ye-QR kuphosta yethu lapho ukusakaza bukhoma kuqala ukungena egumbini lokusakaza bukhoma.
Akusho lutho uma ungasitholi isikhathi sokusakaza bukhoma. Ngemva kokuphela kokusakaza bukhoma, usengakwazi ukuskena ikhodi ye-QR esithombeni bese uchofoza isixhumanisi esingenhla ukuze ubuke ukudlalwa futhi ukuze ufunde kabanzi mayelana nemikhiqizo namasevisi ethu.
NgoSepthemba 23, ngikulindile embukisweni we-e-commerce owela umngcele osakazwa bukhoma.